Friday October 16, 2020 - 06:32:26 in Wararka by Liibaan Jeexoow
War rasmi ah oo kasoo baxay dowladda Faransiiska ayaa lagu sheegay in xaalad bandow ah lagusoo rogay inta badan magaalooyinka waaweyn ee wadankaas kadib markii uu soo laba kacleeyay caabuqa Covid19.
Emmanuel Macron oo ah madaxweynaha Faransiiska ayaa gelinkii dambe ee maalintii Arbaca iclaamiyay in bandow uu ka dhigay dhowr magaalo oo ay kamid tahay magaalada caasimadda ah ee Paris.
Wuxuu sheegay in tallaabadan uu uqaaday si looga hortago halis weyn oo uu sababi karo caabuqa Carona Virus ee wali kusii dhax faafaya bulshada Faransiiska.
isagoo wareysi siinayay telefeshin maxalli ah ayuu hoggaamiyaha Faransiiska sheegay in bandowga oo habeenlle ah uu dhaqangal noqon doono maalinta sabtiga ee soo socota.
Wuxuu bilaaban doonaa 9:00 fiidnimo wuxuuna ku ekaan doonaa 6:00 aroornimo ee waqtiga maxalliga Faransiiska, bandawgan ayaa ka dhaqan geli doono 8-da magaalo ee wadanka ugu weyn waxaana kamid ah, Paris, Marsiiliya,toolooz iyo Raawn.
Madaxweynaha Faransiiska ayaa amaray laamaha ciidamada ammaanka in ay dhaqangal ka dhigaan bandowga oo socan doona illaa afar isbuuci balse wuxuu carrabaabay in lakordhin doono bandowga haddii uu baarlamaanku ogolaado.
24-kii saac ee lasoo dhaafay wasaaradda caafimadda Faransiiskas waxay diiwaan gelisay 30,000 oo kiisaas Karoona ah arrinkaas oo muujinaya xaddiga uu gaarsiisanyahay caabuqan halista ah.
Dalka Faransiiska wuxuu kamid yahay wadamada reergalbeedka ee uu gummaadka daran ka geystay cudurka dilaaga ah ee Carona Virus, wuxuuna cudurkan halakeeyay dhaqaalihii wadankan ugu tunka weyn Ururka Midowga Yurub.
Taliban oo weeraro askar lagu dilay ka fulisay dalka Afghanistan.